'प्रसाद': प्रसाद होइन अभिशाप :: दुर्गा कार्की :: Setopati
सबै महिलामा आमा बन्ने प्रकट वा अप्रकट चाहना हुन्छ। तर कुनै महिलाले एउटा बच्चाका लागि के केसम्म गर्न सक्छे?
तर कुनै पनि महिलाले कसैले जबरजस्ती घाँटी अँट्ठ्याएर, मुख थुनेर, हातगोडा थिचेर हेपाइ, अपमान, अहंकार र क्रुरताको चरम् उत्कर्षमा पुगेपछि स्खलन गरेको फोहोरी वीर्यलाई 'प्रसाद'को रुपमा स्वीकार्ली?
प्रिय महिला पाठक, मलाई क्षमा गर्दै तपाईँ एक्कैछिन आफूलाई त्यस्ती महिलाका रूपमा कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ?
पत्रकार सुशील पौडेलको लेखाइ र दिनेश राउतको निर्देशन रहेको 'प्रसाद' को ट्रेलर हेर्दैखेरी मलाई फिल्म हेर्नासाथ गजब प्रशंसा गरेर एउटा समीक्षा धस्काइदिन्छु भन्ने लागेको थियो।
नारायणीलाई रमेशले मारेन। शायद धेरै बलात्कारीलाई लाग्छ, यिनले के नै नाप्छन् र? शायद त्यसैले धेरै महिलाहरूको मन मारिए पनि ज्यान जोगिएको छ।
र नारायणीले पनि केही नापिन। उजुर गरिन। र रमेश(हरू)को चाहना फेरि पनि पूरा भयो। उजुर त के, नारायणीले आफू बलात्कृत भएको कुरा लामो समयसम्म आफ्नै लोग्नेलाई समेत भनिन। किन भनिन? श्रीमतीलाई अर्काले बलात्कार गरेको कारण श्रीमानले डिभोर्स गरेर हिँडेको समाचार गाऊँबाट आउँदाआउँदैको बाबुरामलाई कसैले सुनाइदिएको सुनेर।
‘पार्च्ड’ बहुप्रशंसित फिल्म हो। त्यसले फिल्मका तमाम कलात्मक मागहरू पूरा गरेको छ र सबभन्दा ठूलो कुरा त्यो स्पष्ट विचारले भरिएको छ। त्यसले भन्छ, महिलाको भावना र आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने व्यक्ति लोग्ने होस् वा छोरो, नराम्रोसित त्यागिन्छ। फिल्म चर्चित र प्रशंसित किन भयो भने अहिलेको भारतमा यो विचार र विद्रोह फैलिनु आवश्यक छ। अर्थात्, फिल्मले युग-चेतनालाई बोक्यो।
उसको प्रेम झुक्किएर बसेको प्रेम हैन। बाबुरामको टोपी उसले जानाजान तानेकी हो। बिहे भएर एउटै ओच्छ्यानमा सुत्दा समेत लोग्नेले शरीरमा हात लग्दा 'शर्म लाउँदैन क्याहो...' भन्ने मान्छे ऊ यौनको भोकले बाबुरामलाई जिस्काउन गएकी झनै हैन। ऊ प्रेममा परेकी हैन, उसले बकाइदा, जानीजानी बाबुरामलाई प्रेम गरेकी हो।
रमेशले 'टेलर' भन्दा उसलाई झनक्क रिस उठ्न सक्नुपर्थ्यो। रिस नउठे मनमा हल्का भएपनि लाग्नुपर्थ्यो, किनकी केटाकेटी छँदाको बाबुराम र वयस्क बाबुरामबीचमा फरक छ, फरक हुनुपर्छ।
ऊ किन गएन पुलिसकोमा? एउटा दर्शकले सोध्न पाउने कि नपाउने?
हो, फिल्म हो र त यसमा स्वतन्त्रता छ। हामी नम्रता श्रेष्ठको देब्रे गालामा मुसाको डल्लो झुण्ड्याइदिन सक्छौँ, वाग्लुङको गाऊँमा नेपाल टेलिकमको टावरले राम्ररी काम नगरेको बनाउन सक्छौँ भने हाम्रो कलम र निर्देशकीय कौशलले नारायणीलाई आफूमाथि भएको त्यस्तो निकृष्ट अपराधका विरुद्ध बोलाउन किन सक्दैन? रमेशलाई झ्यालखानामा कोच्न किन सक्दैन?
फिल्म हेर्न आएका ती तमाम बाबुआमा, जो दिनहुँ समाचारमा आउने बलात्कारका घटनादेखि त्रसित भएर आँखाबाट एकछिन छोरी ओझेल पर्दा समेत झस्कन्छन्, तिनले चलचित्रको के सार लिएर घर जाने? यही कि बलात्कारीलाई भगवानले सजाँयसजाय दिन्छन्, पुलिसलाई भन्न पर्दैन?
हातहातमा मोबाइल र थोरैतिनो सही, ईन्टरनेटको पहुँचले पीडित वा उसको परिवारले लुकाउनै चाह्यो भने पनि कसै न कसैले मिडियासम्म कुरा पुर्‍याइदिइहाल्छ।
आजको समयमा पनि बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधको कुरामा 'सहन सके देख्न पाइन्छ', 'भगवानले हेर्छन्' जस्तो पाराको सन्देश दिनु बलात्कारको सामान्यीकरण गरेको मात्र नभई दण्डहीनताको पक्षमा उभिएको भनेर हामीले भन्न किन नपाउने?
भगवानले सजाय दिने भए कानुन किन चाहिन्थ्यो? पुलिस किन चाहिन्थ्यो? जसरी पनि रमेश पात्रलाई सजाय नै दिलाउनु रहेछ त पुलिससम्म पुर्याइदिएको भए निर्देशकको के जान्थ्यो? फेरि यो त निर्मलाको केसमा जसरी चार महिनासम्म खोज्दा पनि पत्ता नलाग्ने अपराधी पनि त थिएन।
यहाँनेर "बलात्कारी पात्रलाई सजाय दिनेतिर नलागी पेटमा भएको बच्चा जन्मन र बाँच्न पाउनु पर्छ भन्ने अधिकारका लागि उनी लड्छिन्" भनेर फिल्मको समीक्षा गर्नु् कुन दृष्टिकोणबाट 'लड्नु' हो? त्यसो भए छोरीको अपराधीले सजाय पाओस् भनेर निर्मलाकी आमाजस्ती सामान्य पानीपुरी बेचेर गुजारा चलाउने एकल महिला घरि बालुवाटार घरि कन्चनपुर धाउनु के हो? आत्मसमर्पण?
'लडाँइ' सत्यका लागि हुन्छ, निष्ठाका लागि हुन्छ, आफ्नो आस्था र विश्वासको स्थापनाको लागि हुन्छ। चूपचाप अन्याय सहेर बस्नुलाई 'लडाँइ' देख्ने समीक्षाले हाम्रो समाजमा भएको न्यायिक चेतको कस्तो हैसियत बोलिरहेको छ?
जस्तै, फिल्ममा लोग्नेलाई बच्चा राख्न मनाउँदै गर्दा नारायणीले भन्छे, "बीउको हक बीउमा मात्रै सीमित हुन्छ, फलमा हुँदैन र फलको हक किसानसँग हुन्छ।"
अथवा भए नै पनि मायाको पोकोलाई एकातिर थन्क्याएर महिलाहरू अरु विभिन्न कुरालाई आफ्नो प्राथमिकताक्रममा माथि राखेर आमा बन्नबाट जोगिन्छन्। गर्भपतन महिलाकै स्वास्थ्यको लागि पनि उत्तम उपाय होइन, अरु केही नहुँदाको विकल्प मात्र हो तर सामान्य मान्छेले पनि आकलन गर्न सक्छ, वैधानिक र सहज गर्भपतनको विकल्प छँदाछँदै बलात्कारको बीउबाट आमा बन्ने रहर कसलाई होला र?
बलात्कारको वीर्य बाध्यता हुन सक्छ। बलात्कारीको पो दोष, वीर्यको के गल्ती? त्यो वीर्यबाट उम्रने जीवनको के दोष पनि भन्न सकिन्छ। तर त्यो कुनै पनि विकल्प उपलब्ध नभएका अवस्थामा मात्र स्वीकार्य हुनसक्छ।
लोग्नेले टेस्टट्युब बेबीका लागि दिनरात दुख गरेर पैसा जोहो गरेको थाहा पाउँदा नारायणीका आँखाबाट खुसीका आँसु बग्नुपर्ने हो। उसले पतिलाई घ्वामलङ्ग अँगालो हालेर भन्नुपर्ने हो, “जाऊँ, अहिल्यै गएर फाल्दिहालौँ यो...पैसा जसोतसो गरेर तिरौँला पछि...”
तर नारायणीले भन्छे, “टेस्ट्युब बेबी पनि अर्कैको वीर्यबाट बन्ने हो, यो पनि अर्कैको वीर्यको कोख हो, के फरक पर्यो त?”
दिमाग भनेको कला हो, कलालाई पस्कने सीप हो। आँखा भनेको दृष्टिकोण हो, हेराइ हो। कुनै पनि विषयलाई निर्देशकले कसरी हेरेको छ र उसले त्यसलाई दर्शकसामू कसरी पस्कन्छ भन्ने कुराले नै फिल्मलाई स्वाद दिन्छ, मिठास दिन्छ। नत्र दैनिक जीवनमा देखिभोगिरहेका कुरा हेर्न पैसा तिरेर कोही किन हलमा जान्छ?
भलै म चलचित्रमा सेन्सरको विपक्षी हुँ, तर प्रसाद हेरिरहँदा लाग्यो, 'एफ् वर्ड' र अरु धेरै फोहोरी नेपाली शब्दलाई पचाउन नसकेर 'बीप' गर्न लगाउने र त्यति गर्दा पनि 'ए' सर्टफिकेट दिने सेन्सर बोर्डले बलात्कारलाई 'प्रसाद'को रुपमा ग्रहण गर्न लगाएको चलचित्र कसरी पचायो?
त्यहाँ कस्तो लैङ्गिकसामाजिक चेत भएका मान्छे बस्छन्? तिनले के हेर्छन्? के देख्छन् र के सेन्सर गर्छन्? प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
मलाई दुःख लागेको केमा मात्र हो भने यति मीठो लोकल कथा, त्यति अब्बल अभिनय र पत्रकार जस्तो सामाजिक मुद्दाहरूलाई सामान्य मान्छेभन्दा फरक दृष्टिकोणले हेर्न सक्ने 'क्रू' भएको फिल्मले ख्रिसिक्क बनाउने मात्र होइन कि हलबाटै अहिल्यै निस्केर गइहालौँ झैँ जुरुकजुरुक पार्ने सार बोक्नुले हो।
कुनै अविवाहित युवती बलात्कृत भएमा बलात्कारीको जिम्मा लाएर पठाउनु यदि गलत हो भने कुनै बलात्कारीको वीर्यलाई 'प्रसाद'को रुपमा दर्शकलाई बाँड्नु 'पापै' होइन र?
पहिलो कुरा, धरतीमा उम्रने, उब्जने, जन्म लिने वा उत्पादन गरिने जति सबै कुरा प्रसादको रुपमा चढ्दैनन्। परम्परा र धार्मिक मान्यतामा अड्ने हो भने प्रसादको रुपमा चढ्नको लागि चोखो हुनुपर्छ, शुद्ध हुनुपर्छ,भलै के चोखो के बिटुलो भन्नेमा बहस हुन सक्ला। तर एउटा बलात्कारीको हेपाइ, अपमान, अहंकार र बर्बरताको फोहोरी लिङ्गबाट झरेको वीर्य कसरी चोखो, शुद्ध हुन सक्छ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस २, २०७५, ००:१२:००